About Microsoft MCTS and MCITP Exam ~ ITmanHOME
02:24 Microsoft Exam, နည်းပညာ No comments
About Microsoft MCTS and MCITP Exam
Network ပိုင်းကို လေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက် အခုလက်ရှိ Microsoft Company ရဲ့ အမြင့်ဆုံးအောင်လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ MCITP Exam အကြောင်း ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ MCITP ဆိုတာ Microsoft Certified IT Professional ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု MCTS ဆိုတာကတော့ Microsoft Certified Technology Specialist ကိုဆိုလိုတာပါ။ အရင်တုန်းကတော့ Microsoft က MCSE (Microsoft Certified System Engineer) နဲ့ MCSA (Microsoft Certified System Administrator) ဆိုပြီး စစ်ဆေးပေးခဲ့ပါတယ်။ 2008 ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ 27 ရက်နေ့မှာ Windows Server 2008 ကိုတရားဝင်ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်းကြတော့လဲ MCITP ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Trend ကိုပြောင်းပြစ်လိုက်ပြန်တယ်။ MCITP စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုမဲ့သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ Server 2008 ကိုအထူးကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Microsoft Exam ကစာကျက်ဖြေမယ်ဆိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင် အဲလိုလူမျိုးတွေ မျက်နှာငယ်ပြီး အနှိမ်ခံရတက်ပါတယ်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ကယ်တက်လို့ စာမေးပွဲ ၀င်ဖြေတယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်မတက်ပဲနဲ့ လက်မှတ်ကြီးကိုင်ထားပြီး ဘာလုပ်မှာလဲ ?????
MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) Exam
MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) ဆိုတာကတော့ နည်းပညာ နယ်ပယ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ အဓိက စစ်ဆေးပေးတာပါ။ MCITP ကိုသွားဖို့အတွက် ပထမ ခြေလှမ်းပေါ့။ ဥပမာ - Exam 070-680 Microsoft Windows7စာမေးပွဲကို ဖြေလို့ အောင်မယ်ဆိုရင် MCTS လက်မှတ်ရပါပြီ။ အရင် MCSA/MCSE တုန်းကတော့ Client အနေနဲ့ Windows XP ကို MCP (Microsoft Certified Professional) ဆိုပြီး စစ်ဆေးခဲ့တာပေါ့။ နောက် Exam 070-620 Microsoft Windows Vista စာမေးပွဲကို ဖြေလို့ အောင်မယ်ဆိုရင်လည်း MCTS ဖြစ်သွားပါပြီ။ သူကတော့ MCITP ကိုသွားဖို့အတွက် Client Configuration စာမေးပွဲလို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။
MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Exam
MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Exam ဆိုတာကတော့ IT Infrastructures အပိုင်းကို ကောင်းမွန်စွာ Planning (စီမံခန့်ခွဲ) လုပ်နိုင်ရပါမယ်။ Deploying လို့ခေါ်တဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်ရမယ်။ Supporting လည်း လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်။ နောက်တစ်ခု Maintaining လည်း လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်။ Optimizing လည်း လုပ်နိုင်ရပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာ Supporting နဲ့ Maintaining ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ Optimizing ဆိုတာကတော့ ရနိုင်သလောက် စွမ်းအားကုန် ထုတ်သုံးတာကို ပြောတာပါ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် Computer တစ်လုံးရဲ့ ရနိုင်သလောက် performance ကိုမြှင့်သုံးနိုင်ရမယ်ပေါ့။ တစ်ကယ်တမ်း MCITP သမားတစ်ယောက်က အဲဒါတွေကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်ရပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက MCITP စာမေးပွဲမှာ MCITP - SA (Server Administrator) နဲ့ MCITP – EA (Enterprise Administrator) ဆိုပြီးရှိပါတယ်။
MCITP – SA (Microsoft Certified IT Professional – Server Administrator)
Server Administrator ဆိုမှတော့ Client ပိုင်းဖြစ်တဲ့ Windows7တို့ Vista တို့ ဖြေစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်တွေက Standard ရှိတယ်လေ ။ Server Administrator ဆိုရင် Server ရှေ့မှာပဲ ထိုင်ရမယ်။ Server ကိုပဲ ကြည့်ရမယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လဲ ရုံးမတက်ပဲ အိမ်ကနေ ရုံးက Server ကို Remote နဲ့ လှမ်းပြီး ပုံမှန် Maintaining လုပ်ပေးရုံပဲပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ မရဘူးနော် ။ အလုပ်တွေက Standard မရှိဘူး။ Network သမား Server Administrator လည်း Client စက်တွေ တစ်ခုခုဆို ကြည့်ရတာပဲ ။ အစုံတက်ရတယ်။ Network သမား၊ ကွန်ပျူတာ Hardware လဲ သိ့ရမယ်။ Client စက်တွေပျက်ရင်လဲ ပြင်ပေးရမယ်။ Server ပျက်ရင်လည်း ပြင်ရမယ်။ MCITP – Server Administrator ဖြစ်ဖို့အတွက် Client စာမေးပွဲ Windows7တို့ Vista တို့ ဖြေဖို့ မလိုပါဘူး ။ Exam (၃) ခုဖြေရင် ရပါတယ်။ ဒီက သင်တန်းတွေတော်တော်များများကတော့ MCITP – SA အတွက်လဲ Client တစ်ဘာသာပါ ထည့်သင်ပြီး စာမေးပွဲ (၄) ခု ဖြေခိုင်းကြပါတယ်။ ဒါကလဲ သင်တန်းဆရာတွေ က အောက်သက်ကြေအောင် စေတနာနဲ့ လုပ်တဲ့ သဘော နေမှာပါ။ စာမေးပွဲ ကြေးနဲ့ သင်တန်း ကြေးနဲ့ ပိုက်ဆံတော့ ပိုကုန်တာပေါ့နော် ။ ကျွန်တော်တော့ မတက်နိုင်ဘူး ။
MCITP – SA ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ……
(၁) 70-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration ကိုအောင်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွယ်လွယ်ခေါ်ကြတဲ့ AD ပေါ့ ။
(၂) 70-642 Ts: Windows Server 2008 Network Infrastructure, ကိုအောင်ရပါမယ်။ Network Infrastructure Configuration ပေါ့။
(၃) ဒီ Exam ကတော့ Pro ဖြစ်သွားပါပြီ ။ 70-646 PRO: Windows Server 2008 Server Administrator ကို အောင်ရပါမယ်။ အဲဒီ Exam သုံးခု အောင်သွားပြီဆိုရင်တော့ MCITP – SA လက်မှတ်ရသွားပါပြီ။
MCITP – EA (Microsoft Certified IT Professional – Enterprise Administrator)
Enterprise Administrator ဆိုတာကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို IT Infrastructure , Deploying , Supporting , Maintaining , Optimizing စသည်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း Exam (5)ခု ဖြေရပါတယ်။ Enterprise Administrator ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ Client စာမေးပွဲဖြစ်တဲ့ MCTS - Windows Vista (or) Windows7တစ်ခုခုကို ဖြေရပါတယ်။
MCITP – EA ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ …….
(၁) 70-620 TS: Microsoft Windows Vista (or) 70-680 TS: Microsoft Windows7, Configuration ကိုအောင်ရပါမယ်။
(၂) 70-640 TS: Microsoft Windows Server 2008 Active Directory, Configuration ကိုအောင်ရပါမယ်။
(၃) 70-642 TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure , Configuration ပိုင်းကို အောင်ရပါမယ်။
(၄) 70-643 TS: Server 2008 Application Infrastructure , Configuration ကိုအောင်ရပါမယ်။
(၅) 70-647 PRO: သူကတော့ Pro ပေါ့ Windows Server 2008 Enterprise Administrator ကို အောင်မြင်ရပါမယ်။
အဲဒီ exam (၅) ခုကို အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင် MCITP – EA ဖြစ်သွားပါပြီ။ အဲဒီမှာ SA နဲ့ EA နှစ်မျိုးလုံးမှာ 70-640 နဲ့ 70-462 နှစ်ဘာသာလုံးက အတူတူပါပဲ ။ SAနဲ့EA နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဖြေဖို့လိုပါတယ်။ ဖြေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးကတော့ အရင်ဆုံး SA ကိုဖြေ နောက်မှ EA ကို ထပ်ကူးဖြေကြပေါ့။
Note: နောက်တစ်ခု အရင် MCSA နဲ့ MCSE ကိုအောင်ထားပြီးသားလူတွေကတော့ 70:648 TS: Upgrading Your MCSA on Widows Server 2003 to Windows Server 2008 ဆိုတဲ့ တစ်ဘာသာနဲ့ ကျန်တာကတော့ MCITP Server Administartor ဆိုရင် 70-646 Pro: Windows Server 2008 Server Administrator ကိုဖြေရင် ရပါပြီ။ နောက်တစ်ခု EA ဖြေချင်တဲ့ သူတွေကလဲ update စာမေးပွဲတစ်ခုနဲ့ 70-647 PRO စာမးပွဲတစ်ခု ဖြေလိုက်ရင် ရပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ … လေးစားစွာဖြင့် … သူရ ….